Xiddigii hore ee Jeenyo Faarax Odey oo Muqdisho gaaray Qalabna ku wareejiyey XSKK
Iyadoo xiddigihii hore ee ciyaaraha dalka Soomaaliya caanka ka ahaa ay iminka qaarkood dalka dib ugu soo laabanayaan,ayaa waxaa iminka soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimada dalka,ciyaaryahankii hore ee naadigii Jeenyo iyo Xulka kubadda koleyga Faarax Jaamac Nuur (Faarax Odey) oo ka badan 20-sano dalka dibadda uga maqnaa.
Ciyaaryahan Faarax Odey ayaa waxaa uu durba tegey garoonka Kubadda Koleyga ee Wiish Stadium Ex-Lugino halkaasi oo uu ku daawadey kulan ka tirsan Horyaalka heerka Koobaad ee Kubadda Koleyga ee u dhexeeyey Dekedaha iyo Horseed.
Waxaa halkaasi kusoo dhoweeyey ciyaaryahanadii hore ee kubadda Koleyga dalka Wiilal iyo gabdho,oo uu ku iirey Macalin Shiine Guhaad oo isaguba dhowaan dalka soo gaaray, masuuliyiinta XSKK,madax katirsan gudiga fulinta ee GOS iyo taageerayaal badan,isagoo mid mid u gacan qaadey.
Waxaa uu qalab Sports gaar ahaan Funaanado,Kubado iyo seeri ku wareejiyey Masuuliyiinta XSKK oo halkaasi ku sugneyd,gaar ahaan Ku simaha Gudoomiyaha Cali xasan Cali,iyadoo halkaasina uu goob joog ka ahaa,Ibraahim Xuseen cali (Roombo) oo gudiga fulinta ee GOS katirsan.
Cabdi C/dulle Axmed (Baasaalle) oo kadib qalab gudoonsiinta halkaasi ka Hadley ayaa sheegay in XSKK ay aad usoo dhoweeynayaan dhamaan shaqsiyaadkii Kubadda koleyga ee dalka sida Macalimiin,ciyaartoy iyo taageerayaal ee gacan ka geeysanaya horumarinta ay Xiriirku ku howlan yihiin,isagoo aad ugu mahadceliyey Faarax Odey oo qalab muhiim u ah Xiriirka soo gaarsiiyey.
Faarax odey oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa ugu horeyntii aad u amaanay doorka XSKK ay ugu howlan yihiin kor u qaadida iyo soo celinta sharaftii Kubadda koleyga ee dalka,isagoo xusey inuu ku faraxsan yahay inuu dib u arko ciyaartoydii dalka oo qaarkood ay isku koox u wada ciyaari jireen.
“Waa ii farxad runtii imaanshahayga dalka iyo inaan arko garoonkii Ex-lugino oo sidaan u camiran oo tartan uu ka socdo,waxaan iminka keenay qalabkaan oo ah mid hor dhac ah,waxaana balan qaadayaa in qalab intaan ka badan dhowaan soo gaarsiin doono XSKK si uu ugu daboolo baahiyaha dhinaca qalabka lagama maaar-maaanka u ah K koleyga”ayuu raaciyey.
Ciyaaryahan Faarax Odey oo waqooyiga mareykanka ku noolaa sanadihii bur burka ayaa waxaa uu daawadey ciyaar aad u xiiso badneyd oo Dekedaha iyo Horseed dhexmartay,taasi oo ku tirsaneyd horyaalka K koleyga ee dalka,waxaana 52-44 guushu ku raacdey Wiilasha Dekedaha.
W/Qorey: C/Xafiid Zaciimka
S/Qaade: Xuseen Hadaafow